Uurka Archives - Daryeel Magazine
Muuqaalkaan hoose waxay Ubahina nagula wadaagaysaa ducooyin lagu duceysto marki dhal la raadinayo, markii uur la leeyahay iyo markii la foolanayo. Ducooyinkaan waa aayado ka mid ah Qur’aanka kariimka ah, waana ducooyinkii anbiyada, gaar ahaan waxaa ku duceystay Nabi Sakariya iyo Nabi Ibraahim (CS) Alle (SW) wuu ka aqbalay. Ducooyinkan waxay ka kala yihiin: Rabbi laa tadarnii fardan wa´anta khayrul …
Waa Maxay Wallac Maxaase Loo Cuni Karaa?
Wallacu waa astaan muhiim ah oo lagu garto marka haweeneydu ay uur qaado. Wallaca waxaa lagu gartaa matag iyo lalabo. Maxaa keeni kara wallaca? Weli lama hayo sabab rasmi ah oo keenta wallaca balse waxay dhakhaatiirtu u malaynayaan inay keeni karaan: Noocyo homoonada ka mid ah oo jirka ku bata sida hormoonka estrogen-ka, hormoonka progestron-ka iyo hormoonka HCG-ga Sokorta dhiiga oo …
Waa maxay dhiiga yimaada marka uur la leeyahay? Marar badan ayay noqotaa wax aan halis ahayn in dhiig yimaado iyadoo uur la leeyahay, waa arrin dumar badan ku dhacda.. Dhiigu waxaa uu noqon karaa mid khafiif ah, mid buni (kafee) ah, ama mid u eg dhiigii caadada. Dhiigga khafiifka ah ama midka buniga ah inta badan ma ahan wax khatar …
Waa Maxay qalliinka dhalmada (Cesarean Section) ? C- section Waa qalliin lagu sameeyo dumarka marka aysan suurtagal ahayn in cunuggu u soo maro xubinta taranka oo ay si caadi ah u dhalaan. Waxaa lagu sameeyaa hooyada si ilmaha looga saaro riximka ama minka. Qalliinkan meeqa ayuu kala baxaa? Qalliinkan waxaa loo kala qaadaa labo nooc oo kala ah: Mid qorshaysan: …
Halkaan ka baro 10 qodob oo ka yareynaya stress-ka iyo xanuunka foosha. Raadso “Doula” hadii aad heli karto: doula waa haweeney loo tabaray inay caawiso gabadha xiliga foosha iyo dhalitaanka. U sheeg waxa kasta oo aad dareemayso sida cabsi iwm. Hadii aadan haysan doula aqoon iyo khibrad leh waxa ay samaynayso, waxaad diyaarsan kartaa qof ehelkaaga ama asxaabtaada ah oo …
dumarkaa ugubka ee aan horay wax usoo dhalin waxaa laga yaabaa inay foosha runta ah ay ku qaadato mudo ka badan 12 saacadood, halka haweeneyda soo dhashay hal cunug ama ka badan ay ku qaadan karto 12 saacadood ka yar. Calaamadaha foosha waxaa loo kala qeybood oo kala ah fool aan rasmi ahayn iyo fool rasmi ah. Caalamadaha foosha aan …
Hooyada uurka leh ma cabbi kartaa malabka? Haa, malabka waa la cabbi karaa xilliga uurka. Waxaa laga yabaa inaad maqashay in malabku uusan u fiicanayn ilmaha, waana run. Malabka waxaa ku jirta bakteeriyo jeermis u keeni karta ilmaha yaryar madaama calooshoodu aysan awood u lahayn inay iska difaacdo oo ay la dagaalanto bakteeriyadaas. sidaas darteed dhakhaatiirtu waxay ku taliyaan in malabka …
Fursadaha Uurka Mataanaha
Mataano waa marka caloosha hooyada ay wada galaan in ka badan hal cunug. Mataanuhu waxay ka kooban yihiin labo qeybood oo kala ah mataano ka samaysmay hal ukun iyo kuwo ka samaysmay labo ukun. Dumarka caadada u hela sida joogtada ah waxay soo deyaan hal ukun bil kasta, ukuntaas haday bacrimin heli weydo dhiiggii caadada ayay noqotaa. Ukun kasta waxaa gala …
Sidee Uur Lagu Qaadi Karaa? Waqtigee Se Ugu Fiican?
Run ahaantii uur qaadistu waxay ku xiran tahay awoodda Rabbi (SW) isagaana garanaya xiliga qofku uur qaadayo. Sida cilmi baarista lagu ogaaday fursadda ugu wanaagsan ee uur lagu qaado waa marka ugxanta lasoo daayo ama ay diyaar u tahay in la bacrimiyo. Haweenka inta badan waxay caadadu ka maqnaataa 28 maalmood, maalinta ugxanta lasoo daayo waxay ku aadaa kalabartanka oo …
Hababka Ugu Wanaagsan Ee Dhaqdhaqaaqa Xiliga Foosha
Heerka Koobaad ee Foosha Heerka koobaad waa bilawga foosha waxana uu socdaa ilaa afka ilmogaleenku si buuxda u furmayo taasoo ah 10 sentimitir. Kani waa heerka foosha ee ugu dheer waxana uu socon karaa 12 ilaa 17 saacadood. Heerkan waxa loo kala qaybin karaa foosha hore, foosha firfircoon iyo kalaguurka. 1. Inta lagu jiro foosha hore, afka ilmo-galeenku waa uu …
Hab-nololeedka bulshada somaliyeed waxa weeye mid ku salaysan ad-adeeg taaso salka ku haysa dabeecada iyo degaanka ay ku nool yihin oo ku gedamanyihin caqabado iyo dhibatoyin fara badan, hooyada somaliyeedna waxba kama duwana bulshadaa. waxay ahayd iyadoo foola mid gudata wajibaadkeeda shaqo ee gurigaa waxay ahayd mid iyadu umula jixijix muujin iskuna qabata hawl kastoo lasoo gudbonata hadda oo aynu …
Uurku wuxuu yimaada marka ay manida bacrimiso ugxanta laga soo daayay ugxan sidaha, ugxantu waxay soo martaa tuubada ugxan sidaha oo ah meesha bacrimiska uu ka dhaco. Ugxanta marka ay bacrismato waxay usoo gudubtaa minka oo ah meesha ay ku dhageyso. Marka ukunta bacrimisan si guul ah ay ku dhagto uur ku jirta waxaa meesha ka dhasha uur. Uurku waa hab socda mudo 40 todobaad. …
Daraasad cusub oo Mareykan ah ayaa sheegtay in quudashada cuntooyinka hodanka ku ah vitamin “D”gu inta hooyadu uurka leedahay ay yarayso halista in carruurta ay haleelaan cudurada, neefta iyo xasaasiyada. Cilmi baarayaal oo katirsan kuliyada dawada ee Mount Sinai ee dalka Maraykanka ayaa daraasad ay soo saareen ku sharaxay in vitamin “D”gu uu xiriir la leeyahay yaraynta halista haleelida xasaasiyada …
Waxtarka Shukulaatada Madow Ay U Leedahay Caafimaadka Hooyada Uurka Leh Iyo Ilmaha Ay Siddo
Cilmibaadhis ay dhowaan sameeyeen xeeldheerayaal ka tirsan jaamacadda Laval ee magaalada Quebec dalka Kanada ayaa daahfurtay in shukulaatada madow oo hore loogu ogaa in uu xaaladda nafsiga ah dejiyo dabeecaddana furfuro uu sidoo kalana raad caafimaad oo togan ku leeyahay caafimaadka hooyada uurka leh iyo ilmaha ay siddo. Cilmibaadhistani waxa ay caddaysay in gabadha oo xilliga uurka cunta shukulaatada guud …